राहत लिने कसरी ? | Nepal's Best Travel Guide
May 2, 2015 Nepal No comments
राहत लिने कसरी ?
काठमाडौं-राजधानीको नरदेवी, ताहननी चोकका राकेश महर्जन भुइँचालो गएको सातौं दिनसम्म आफ्नो घरमा सुत्न सकेका छैनन्। उनको घर ढलेको छैन तर नराम्ररी चर्किएको छ। उनको चिन्ता छ– यो घरमा बस्न सकिँदैन, पुनर्निर्माण गर्न पैसा छैन। ‘सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहत दिने र चर्के–भत्केका घर पुननिर्माण गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ भन्ने सुनेको छु, त्यो सहयोग हामीले पाउँछौं कि पाउँदैनौं?’ उनले प्रश्न गरे, ‘पाउँछौं भने राहत वितरण गर्ने निकाय कुन हो?’
यो राकेशको मात्र प्रश्न होइन। मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बैठकले भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत र चर्के–भत्केका घर पुननिर्माणका लागि आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेपछि उक्त सहयोग कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ।
कसलाई कति राहत?
सरकारले भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ र मृतकको किरियाका लागि ४० हजार दिने निर्णय गरेको छ। भूकम्पमा परी घरबारविहीन भएका प्रत्येक परिवारका लागि अस्थायी आश्रयस्थल बन्दोबस्त गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ। यसका लागि त्रिपाल, पाल, प्लास्टिक सिट वा अन्य स्थानीय निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै, पुरानो घरमा फर्कन नसक्ने परिवारको सुरक्षित बसोबासका लागि शिविर स्थापना गरिनेछ। सामान्य क्षति भएको घर मर्मत गरी आफ्नै घरमा फर्कन चाहनेलाई सरकारले २५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च दिनेछ। भूकम्पबाट घाइते भएकाहरूको शल्यक्रियाका लागि प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले अस्पताललाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको छ।
कुनै पनि अस्पतालले आफूसँग भएको सेवा र उपचारबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नपाउने जनाउँदै मन्त्रिपरिषद बैठकले सेवाबापतको रकम एकमुष्ट दिने निर्णय गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको शल्यक्रिया खर्च उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने जनाइएको छ।
कसरी उपलब्ध हुन्छ?
सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका परिवारले राहतको १ लाख र किरिया खर्च ४० हजार रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसका लागि सरकारले पहिलो चरणमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिइसकेको उनले बताए।
‘गृहले भूकम्पबाट मानवीय क्षति पुगेका जिल्लाको तथ्यांक हेरेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनका नाममा रकम निकासा दिने काम सुरु गरिसकेको छ,’ सुवेदीले शुक्रबार नागरिकसँग भने।
उनका अनुसार भूकम्पप्रभावित परिवारलाई केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तहमा संयन्त्र बनाएर राहत वितरण भइरहेको छ। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व र नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा गाविसमा गाविस सचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारले भूकम्पबाट क्षति पुगेका सबै जिल्लामा दैविक प्रकोप उद्धार समिति बनाएको छ। यही समितिले जिल्ला प्रशासन, गृह, स्थानीय विकासलगायत विभिन्न निकायबीच समन्वय गरी क्षतिको तथ्यांक संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सचिव सुवेदीका अनुसार गाविस, नगरपालिकाजस्ता स्थानीय निकायले भूकम्पबाट मृत्यु भएका व्यक्ति वा परिवारको नामावली संकलन गरी जिल्ला प्रशासनमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यही तथ्यांकका आधारमा तत्कालै किरिया खर्चबापत सम्बन्धित परिवारलाई ४० हजार रुपैयाँ वितरण गरिनेछ। पछि उक्त परिवारलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिइनेछ। ‘कुनै परिवारले सबै सदस्य गुमाएको भए त्यस्ता परिवारका नजिकका आफन्तलाई किरिया खर्च उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने।
भूकम्पमा ज्यान गुमाएका परिवारको लगत संकलनका लागि गाविस र नगरपालिकाबाट कर्मचारी र गृह मन्त्रालय मातहत प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सबै क्षेत्रमा परिचालन गरिने उनले बताए। ‘उद्धार र राहत वितरण क्रममा पनि यस्तो लगत संकलन हुनेछ,’ उनले भने।
यस आधारमा भूकम्पबाट कसैको परिवारमा मानवीय वा भौतिक क्षति भएको छ भने सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ। त्यहाँ आफूलाई परेको क्षतिको विवरण टिपाएपछि राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
गत शनिबारको महाभूकम्पमा परी शुक्रबारसम्म साढे ६ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भएको छ। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीनसहित १२ जिल्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ। अहिलेसम्म भूकम्पबाट ३० जिल्लाभन्दा बढीमा क्षति पुगेको छ।